နည်းပညာ ဖလှယ်ရာ: Bat Files သင်ခန်းစာများ
>>>> ဤ tutorial သည် Bat အကြောင်း တစ်ခုမှ မသိ၍ အခုမှ စတင်လေ့လာမည့် သူများကို ရည်ရွယ်ရေးသား ခြင်းဖြစ်ပြီး bat အကြောင်းတီးမိခေါက်မိရှိပြီးသူများ အဖို့ကတော့ နောက်လာမည့် အခန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဟုထင်ပါသည်။ ဤ tutorial နှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်ပါ ၊ အကြံပေးပါ ၊ ပြန်လည် ဆွေးနွေးပါ ၊ ယခု ဆွေးနွေးထားသည် အထိထဲမှ သိလိုသည်များရှိလျှင် ၊ နားမလည်သည်များရှိလျှင် မေးပါ ၊ ကျနော် ကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည်။ လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပြပေးမည့်သူများရှိပါကလည်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆို လက်ခံပြီး ကျေးဇူးတင်မှာပါ။ သို့ပေမယ့် မကောင်းပြောပြီး သိပြီးသားတတ်ပြီးသားကို ရေးနေသည်ဟုထင်သောသူများမှ လာရောက်ပြောဆိုပါက မည်သည့်တုန့်ပြန်မှုမျိုးမှ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်။ လေ့လာချင်သော သူများအတွက်သာ ရေးသားပေးခြင်းဖြစ်၍ အကျိုးမရှိဟု ထင်ပါက ဖတ်မနေပါနှင့် ကျော်သာသွားပါ။ စရေးကတည်းက ကျနော် ရေးချင်လွန်းလို့ အားနေလို့ ရေးရတာလည်း မဟုတ်ပါ။ တောင်းဆိုလာတဲ့ သူတော်တော် များပြီးတော့ တောင်းတဲ့သူတိုင်းက ကျနော့် အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေမို့ ရေးပေးဖြစ်သွားတာပါ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ bat နဲ့ ပတ်သက်လို့ တော်တော်များများရေးပေးသွားပါ့မယ်။ အကုန်နီးပါးသိအောင် ဒီ tutorial တစ်ခုတည်းနဲ့ ရေးပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ဆက်လက် စောင့်မျှော်ပေးကြပါ။ နောက်ပြီးတော့ ကြော်ငြာဝင်လိုက်ဦးမယ် VB.NET 2008 နဲ့ C#.Net 2008 တို့ကိုလည်း E-Book ဖြစ်ဖြစ် ၊ စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် ထုတ်လို့ရအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ e-book ဆိုရင်တော့ အလကားပေးဖြစ်မယ်။ စာအုပ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်လည်း သှူဌေးမဟုတ်တော့ အရင်းအတိုင်းတော့ ရောင်းပေးမယ်ဗျာ။ E-Book ဖြစ်အောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးပါ့မယ်။ Source http://www.myanmaritresource.info
Bat Files သင်ခန်းစာ (၂)
ဒီလောက်ဆို call နဲ့ exit အကြောင်းသိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ Source http://www.myanmaritresource.info
Bat Files သင်ခန်းစာ (၃)
Bat files အကြောင်းကို သိချင် လေ့လာချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ကိုယ်တိုင်းရေးမဟုတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မသိခင်က စလေ့လာ မိခဲ့တဲ့ ဆိုဒ်မှ မှတ်စုအနေနဲ့ ကူးထားခဲ့တာလေးပါ။ အဲ့ဒီဆိုဒ်ကို ညွန်းချင်ပေမဲ့လည် လက်ရှိ ဆိုဒ်လိပ်စာကလည် မတွေ့တော့တာ ကြောင့် စာရေးသားသူအနေနဲ့ နားလည်ပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်း ရေးသားထားတာ မဟုတ်တာ ကိုတော့ ရိုးသားစွာ ၀န်ခံပါတယ်။ ဒါကြောင့် မသိမနားလည်ရင်တော့ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ အကျွမ်းကျင်ဆုံး အဆင့် မဟုတ်ပေမဲ့ တက်နိုင် သမျှ ရှင်းပြပေးပါမည်။ မှုရင်း အရေးအသား အတိုင်း မပြင် မဖြည့်စွတ်ဘဲ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ အခု ကျနော် ရေးပေးမှာကတော့ Windows Application တစ်ခုကို ဘယ်လို ခေါ် Run မလဲဆိုတာပါ အောက်မှာပေးထားတဲ့ Code ကို Notepad မှာရိုက်ထည့်ကြည့်ပါ့မယ်…
ဒီနေ့တော့ ကျနော့် TuT ကို ဒီလောက်နဲ့ ရပ်နားပါရစေ။ နောက်နေ့တွေမှာ For နဲ့ Looping ပတ်တာကို အသေးစိတ်ရှင်းပြသွားပါမယ်။ လိုအပ်တာရှိရင်လည်း ဖြည့်စွက်ပြောပေးကြပါ။ သိချင်တာရှိရင် ၊ ကျနော့်ကို ရေးစေချင်တာရှိရင်လည်း မေးခဲ့ ၊ ပြောခဲ့ကြပါ။ ကျနော် တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။ ကျနော် သိရင်သိတယ် မသိရင်မသိဘူး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပေးပါ့မယ်။ written by SYKO
Bat Files သင်ခန်းစာ (၄)
Bat Files သင်ခန်းစာ (၅)
ကျနော် တို့ရဲ့ TuT ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြရအောင်….
ဒီနေ့မှာတော့ Condition စစ်ခြင်းကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ IF အကြောင်းကနေစတင်ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ အရင်ရက်တွေက IF ကို Coding ထဲမှာ ထည့်သုံးခဲ့ဖူးပေမယ့် ကျနော် အသေးစိတ် ရှင်းပြခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီ့အတွက် If နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိနိုင်အောင် အခု ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ အရင်ရက်တွေက ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ ဟာတွေက Ref မရှိပေမယ့် ဒီတစ်ခါရေးတဲ့ဟာကတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပြန်လည်စိတ်ပါလာပြီး IF နဲ့ ပါတ်သက်လို့ အသေးစိတ်ရေးပေးချင်တဲ့ စိတ်လည်း ရှိတာကြောင့် Google ကနေရှာဖွေပြီး Ref လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ Batch File Programs တွေကို Intel ရှိစေဖို့နဲ့ ပိုမို အသုံးတည့်စေလိုတဲ့ အခါတွေမှာ If statement တွေကိုအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို အသုံးချခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ parameter တွေ Variable တွေကို စစ်ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ Task တစ်ခုစီကို အလုပ်လုပ်စေတာမျိုးတွေ ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး သူက ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ File ကို လိုချင်တဲ့နေရာမှာ ရှိမရှိကိုပါ စစ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ If ကို Variable တွေကို စစ်တဲ့ အခါမှာ သုံးတယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းမှတ်နိုင်ပါတယ်။
File တစ်ခုကို ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ နေရာမှာ ရှိမရှိကို စစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အသုံးပြုလေ့ရှိတယ် If ရဲ့ ရေးပုံရေးနည်းကတော့…
ကျနော့် ရေးသားပုံအတိုင်း If ရဲ့ ရေးပုံရေးနည်းကို နားလည်လွယ်စေဖို့ ဥပမာနဲ့ ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ Code ကို Notepad ထဲမှာ ကူးထည့်လိုက်ပါ….
အပေါ်က Code ရဲ့ အလုပ်လုပ်မယ့်ပုံစံကို လေ့လာကြည့်ရအောင်…
သူက c:\_autoexec.bat ဆိုတဲ့ file ရှိမရှိကို စစ်ပါမယ် ၊ အကယ်လို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ echo နဲ့ ‘The File Exists at that place’ ဆိုပြီးတော့ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ ၊ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ဘာအလုပ်မှဆက်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ်လိုရေးကြမယ်ဆိုတာ နားလည်လွယ်စေဖို့ အောက်မှာ ရှိတဲ့ ဥပမာလေးကို လေ့လာကြည့်ရအောင်….
IF EXIST C:\_syko.txt goto SYKO
echo SYKO exists
echo SYKO doesn’t exist
အပေါ်က ဥပမာကို Run လိုက်မယ်ဆိုရင် အလုပ်လုပ်မယ့် ပုံစံကတော့….
အကယ်လို့ C:\_syko.txt သာရှိမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ goto ကို သုံးပြီးတော့ SYKO ဆိုတဲ့ အပိုင်းတစ်ခုဆီလွှဲထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် File သာရှိရင် အဲဒီ့ SYKO ဆိုတာကို လုပ်မှာပါ။
အဲ.. အကယ်လို့များ file သာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် စစချင်းရေးခဲ့တဲ့ Program မှာ လိုရပ်သွားမှာဆိုးတဲ့ အတွက် goto end ဆိုပြီးတော့ နောက်တစ်လိုင်းစစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ စစ်ခြင်းအားဖြင့် File မရှိတော့ရင် Program ရပ်သွားချင်းမှ ရှောင်ဖယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Program က နောက်တစ်လိုင်းကို အလိုလိုဆင်းဖတ်ပြီးတော့ end ဆိုတဲ့ အပိုင်းကို ရောက်သွားမှာပါ။ ဒါဆိုရင် User အတွက်လည်း doesn’t exist ဆိုတဲ့ message ကို ပြန်လည်မြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
IF NOT EXIST c:\_syko.txt ECHO It doesn’t Exist
>>> IF EXIST c:\_autoexec.bat IF EXIST c:\_autoexec.bak ECHO Both Exist <<< **************************************************************************** အပေါ်မှာကျနော် ရေးပြခဲ့တာတွေက File ရှိမရှိကိုဘဲ စစ်လို့ အဆင်ပြေတာပါ။ အကယ်လို့များ ကျနော်တို့ဟာ directories တစ်ခုရှိမရှိကို စစ်ချင်ပြီဆိုရင်တော့ အခက်တွေ့ပါပြီ။ အဲဒီ့လို အခြေအနေမျိုးမှာတော့ NULL ဆိုတာလေးက အသုံးတည့်ပြီပေါ့ဗျာ။ NULL ဆိုတာကတော့ ဘာမှမရှိတာပါ။ DOS ကနားလည်တာကတော့ Directory တစ်ခုမှာ NULL ဆိုတဲ့ Folder တစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့။ (ကျနော်လည်းမသိဘူး Google ပြောတာ။ ) ဒါဆို ကျနော်တို့ c:\_windows ဆိုတာများရှိလေမလားလို့ စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်လားဗျာ။ အဲဒီ့လို စစ်ဆေးဖို့ကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါ အပေါ်မှာ ကျနော်တို့ ရေးခဲ့သလို IF EXIST ကို ဖြည့်ရေးသွားရုံပါ။ အောက်က Code ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ IF EXIST c:\_windows\_nul ECHO c:\_windows exists အဲဒီ့လိုနည်းမျိုးနဲ့ဘဲ Drive တစ်ခုဟာ ခွင့်ပြုထားတဲ့ Drive ဟုတ်မဟုတ်စစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အောက်က Code ကို ကြည့်ကြည့်ပါ။ IF EXIST c:\_io.sys ECHO Drive c: is valid ဒီလောက်ဆိုရင် File ရှိမရှိကို IF နဲ့ စစ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အားလုံး စုံသွားပြီဖြစ်လို့ နောက်တစ်ခန်းမှာ User ရိုက်လိုက်တဲ့ Parameter တွေကို စစ်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်သွားပုံကို ရှင်းပြပါ့မယ်။ ခုတော့ နားလိုက်ပါဦးမယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ written by SYKO
Bat Files သင်ခန်းစာ (၆)
ဒီနေ့တော့ အချိန်မရတော့လို့ ဒီလောက်ပါဘဲ။ written by SYKO
Bat Files သင်ခန်းစာ (၇)
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Choice Command ကို အကြမ်းဖျင်းသိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ နောက်နေ့မှာတော့ CHOICE နဲ့ အတူ IF ERROR LEVEL ဆိုတဲ့ Command ကို အသုံးပြုပြီးတော့ error level သတ်မှတ်တဲ့ ပုံစံကို ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ ဒီနေ့တော့ CHOICE နဲ့ တင်ရပ်ထားပါ့မယ်။ CHOICE နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိမ်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် .bat လေးတွေရေးကြည့်ကြပေ့ါ… ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ written by SYKO
မိုးထက်မြင့် ဆီက တဆင့်ကူးယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
Labels: windows, နည်းပညာ
Thank for yor kind
25 May 2017 at 04:44